Izikhululo zeenqwelomoya zaseMoscow: Iinqwelomoya ezintathu zirhoxisiwe, ngaphezulu kweenqwelo moya ezingama-50 zilibazisekile ngenxa yekhephu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Izikhululo zeenqwelomoya zaseMoscow: Iinqwelomoya ezintathu zirhoxisiwe, ngaphezulu kweenqwelo moya ezingama-50 zilibazisekile ngenxa yekhephu
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Februwari 13, 2021
Ikhephu elinamandla liqale eMoscow kwinxalenye yesibini yangoLwesine kwaye inokuhlala kude kube ngu-14 kaFebruwari
Iinqwelomoya eziyi-21 zilibazisekile kwisikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo
Iinqwelomoya ezi-5 zilibazisekile kwisikhululo senqwelomoya iVnukovo
Iinqwelomoya ezi-2 zirhoxisiwe kwaye i-36 ilibazisekile eDomodedovo Airport
Ngokwedatha kwiibhodi ezikwi-intanethi zeenqwelo moya zaseMoscow, ngaphezulu kweenqwelo moya ezingamashumi amahlanu zilibazisekile okanye zafika emva kwexesha, kwaye ezinye iinqwelomoya zarhoxiswa kwikomkhulu laseRussia ngoMgqibelo ngenxa yekhephu elinzima.
Ukusukela nge-8: 40 kusasa ngexesha laseMoscow, iinqwelomoya ezingama-21 ziye zalibaziseka Isikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo, kunye nohlanu-ngaphakathi Vnukovo moya. Iinqwelomoya ezimbini ziye zarhoxiswa zaza i-36 yalibaziseka kwisikhululo senqwelomoya i-Domodedovo, ngelixa e-Zhukovsky Airport enye inqwelo-moya iye yarhoxiswa yaza enye yalibaziseka.
Ikhephu elinzima eliqale eMoscow kwinxalenye yesibini yangoLwesine kwaye inokuhlala kude kube ngu-14 kaFebruwari.
Musa ukuya eSpain, ePortugal, eCyprus, eCuba ...